Uber, ilay Goavana Ao Silicon Valley, Voarirotry ny Tantara Ratsin’ny Seza Hazo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Marsa 2017 4:42 GMT
Vakio amin'ny teny polski, Ελληνικά, Español, English
Sary Facebook nozarain'i Darya Catch, mpampiasa Facebook ary avy eo naverin'ireo mpampiasa media sosialy sy ireo Kazakh mpamoaka vaovao naparitaka.
Ny 6 Martsa, rehefa niantso taksi Uber tao Almaly, tanàna iray lehibe indrindra ao Kazakhstan ity renim-pianakaviana iray sy ny zanany vavy, tsy nanampo velively hahita mpamily iray manao fonon-tànana hipetraka eo anoloan'ny familiana ilay limozina (limousine). Fa ny hevitra hoe ireo fanaka rehetra ao anatiny fiara dia mety hifatopatotra amin'io avokoa raha ny marina dia tsy tokony ho filàna voa tsy àry tafahoatra.
Avy eo, sary iray nalain'ny iray tamin'izy mianaka ary nakariny tao amin'ny Facebook-n'ilay zanany vavy, Darya, izay mampiasa ny anarana Darya Catch ao amin'ny media sosialy, no mampiseho seza hazo anankiroa natao ho solon'ny karipetra hanaingoana ny atin'ilay fiara nentin'ilay mpamily natolotry ny Uber ho azy ireo.
Tamin'ireo seza ara-dalàna nifanatrika tamin'ireo seza ireo i Darya sy ny reniny no nipetraka.
“Fa ahoana moa raha efatra izahay no tao?” hoy Darya nanontany tao anaty fanehoankevitra nalefany tamin'ny Facebook ho an'ny Global Voices. “Tsy maintsy nipetraka tamin'ireo seza hazo ireo ve izany ny roa taminay?”
Nolazain'i Marina renin'i Darya fa “nihilangilana tetsy sy teroa” ireo seza ireo nandritry ny dia, lasa loza nananontanona ho an'ny fitoniana. Nihanihany ilay mpamily hoe mbola azony asiana latabatra aza ho azy ireo raha tian'izy mianaka.
Ampy tsara ilay lahatsoratra mba hisarika ny sain'ilay TJournal, ambohipihaonan'ny media Rosiana sy Tengri News ilay masoivohom-baovao Kazakh an'ny tsy miankina.
Nilaza tamin'ny Tengri ny sampandraharaha mpifandray amin'ny gazety ao amin'ny Uber any an-toerana fa “efa nisy ny fepetra noraisina” momba ilay mpamily, mba hiantohana ny tsy hiverenan'ny toejavatra “mampalahelo” ahitàna seza hazo mandehandeha toy iny.
Tsy nanamafy ilay sampandraharaha raha toa noroahana tsy ho ao anatin'ny tambajotra Uber na tsia ilay mpamily, izay manana kintana dimy amin'ny fankafizana.
Vaovao ho an'ilay firenena ao Azia Afovoany ny Uber, izay sady tonga tao Astana renivohitra, no nisy koa tao Almaty tamin'ny fahavaratra farany teo. Ilay tolotra ampiasana fampiharana “dia miankina amin'ireo teknolojian'ny finday avo lenta ho toy ny mpitantana ny fitsinjarana sy ny fandoavana sarany ao aminy“.
Ao Kazakhstan, safidy mahafaly no omeny manoloana ireo fitaovana tena mahazatra hahazoana taksi ao amin'ilay firenena — fanakànana ara-bakiteny amin'ny tànana ireo fiara rehetra mandalo sy miady varotra sarandàlana eo noho eo miaraka amin'ny mpamily — ary ny lafo indrindra, saingy rehefa atambatra dia ny fomba azo antoka indrindra hiantsoana orinasa matianina manana fahazoandàlana hitrandraka taksi.
Noho io antony io dia haingana fitombo ilay tolotra raha mitaha amin'ilay Yandex fampiasa Rosiana mpifaninana aminy any amin'ireo tanàna roa manankarena indrindra ao Kazakhstan, tanàna izay ahitàna ny finday avo lenta eny rehetra eny.
Fa ilay tantaranà seza hazo no singam-bolo nandavo ny vositra ka nanaratsy endrika ilay orinasa tao anatin'ny fotoana izay mampalaza ratsy azy erantany ho manao tsinontsinona ny fifandraisana aman-olona sy manararaotra ireo mpiasa ao aminy.
Marobe ireo Kazakhstani mpamaky ny lahatsoratra nalefan'i Darya no nizara ilay fanehoankevitra voalohany nahazendana nalefany :
Uber. Fa tena kaondrana tanteraka ve ianareo e? Toy izao ve no endriky ny fanombohana fandraharahana Kaliforniana iray?